Sida loo Diiwaan gasho cunugaaga 4-Sano jirka ah Dugsi ku yaala Boston | Boston School Finder
Sida looga qoro cunugaaga 4-Sano Jirka ah Dugsi Ku yaala Boston
Magaalada Boston, marna goor hore ma ahan in laga fikiro xulashooyinka dugsiga ilmahaaga. Haddii aad xiiseyneyso dookhyada dugsiyada dadweynaha, jaartarka, ama dugsiyada gaarka loo leeyahay, dugsiyo badan ayaa qaata ardayda da'doodu yar tahay laga bilaabo tahay 4sano jir, qaarna xitaa waxay qaataan markay da'doodu tahay 3 sano jir.
Magaalada Boston, ilmahaan horey wax u bartay waxay leeyihiin fasaladooda gaarka ah pre-K oo loo qoondeeyay da'da: K0 oo loogu talagalay 3 -sano jirada iyo K1 oo loogu talagalay 4-sano jirada. K2 waa fasalka caadiyan la xariira fasalka birimada ah ee dugsiyada caadiga ah ee ardayda galaaya da'da 5-sano jir.
Sabaabta Aad Dugsiga Ugu Diiwaan geliso Ilmahaaga 3- ama 4-Sanno Jir
Kooxdaan da'du waa tirada ugu badan ee ku biira dugsiyada Dadwaynaha ee Boston, taasoo macnaheedu yahay inay jirto tiro aad u badan oo carruurta 4-sano jirada ah oo dhammaan isku dayaaya inay boosas ka helaan dugsiyada ku habboon. Sidaas awgeed, waa muhiim inaad cunugaaga 4-sano jirka ah ka diiwaan geliso dookh kasta oo dugsi oo qoyskaagu heli karo.
Xasuusnoow: waxaad ka qori kartaa cunugaaga boos kasta oo dugsi oo uu ka helaayo Boston, laakiin kama dhigna inay qasab tahay inaad cunugaaga ka diiwaan geliso dugsiga uu booska ka helay. Haddii aan nahay Boston School Finder, waxaan doonaynaa inaan xasuusino qoysaska inaad mar kasta iska diidi karto boos laguu yaboohay, laakiin aadan diidi karin boos aan lagu siin.
Marka lagu daro dookhyada K0 iyo K1 ee laga helo BPS, Boston waxay sidoo kale balan qaadaysaa inay bixiso boosaska fasalka guud ee UPK—ee fasalka Xanaanada—oo la siinaayo carruurta da'doodu tahay 4 sano jirada. In kasta oo tirada kuraasta UPK la xadidi karo, Magaalada ayaa ku dhawaaqday bishii Abriil 2019 inay ku kacday $15 milyan si loo abuuro dheeraad ah 750 kuraas tayo sare leh oo UPK ah oo ku taal Boston oo loogu talagalay 4-sano-jirrada 2020-2021 sanad dugsiyeedka.
Kuraasta barnaamijka Boston ee UPK waa u LACAG LA'AAN qoysaska reer Boston waxaana u adeegta Ururada Ku Salaysan Bulshada (CBOs). Ka qaybgalka UPK waxay waafaqsan tahay manhajka horay u jiray ee BPS iyo heerarka u degsan boosaska K1 ee dugsiyada BPS; macalimiinta ururka CBO ee ka qaybgalaayaana waxay tababar iyo shahaado ku haystaan manhajkaan.
U xulida dugsi aad ugu habboon cunugaaga ayaa ah mid kamid ah go'aannada ugu muhiimsan ee aad samayso waalid ahaan—waxaana aaminsan nahay inay muhiim tahay in qoysasku ay cunugooda geliyaan dugsi ku habboon sida ugu dhakhsaha badan ee ay awoodaan. Akhri xogta ku aadan sida la iskaga qoro loona codsado dhammaan dookhyada ay heli karaan 4-sano jirada ku nool Boston.
Gudaha Boston Public Schools
Hadda, waxaa jira 78 dugsiyada BPS ah oo bixiya boosaska K1 lana siin doono ardayda gaari doona 4 sano jir bisha Sibteembar. 1, 2020. Maadaama ay jiraan tiro yar oo boosaska K0 iyo K1 oo la heli karo, waxaan ku talinaynaa in qoys kasta oo uu u joogo 4-sano jir inay ka qoraan booska fasalka K1 BPS inta lagu jiro wareegga Diiwaan Gelinta Muhiimka ah.
Fasalada K0 iyo K1, qoysasku waa inay isdiiwaan gashaan Jimcada, Janaayo. 31, 2020 si ay ugu qalmaan Diiwaan Gelinta Muhiimka ah ee BPS.
(Qoysasku wali way isdiiwan gelin karaan K0 iyo K1 kuraas kadib mudada kama dambaysta ah, laakiin aad ayay ugu egtahay inay jiri doonaan kuraas hadhay haddii ay diiwaangeliyaan.)
Ururada Bulshada ee UPK
Waxaa jira tiro kooban oo LACAG LA'AAN kuraas ah oo loogu talagalay 4-sano-jirka Boston oo dhan iyadoo qayb ka ah barnaamijka UPK.
Si aad ilmahaaga uga diiwaangeliso CBO ku xiran CBO sanad dugsiyeedka 2020-2021:
Cunugaagu waa inuu jiraa 4 marka la gaaro Sebteembar. 1, 2020.
Buuxi foomkan Xiisaha UPK ee tooska ah.
La xariir Joelle Auguste, Maamulaha Adeegyada Wada shaqaynta Qoyska iyo Fahanka ee Boston UPK ee Dugsiyada Dadweynaha ee Boston, si looga hadlo dookhyada UPK ee aad helayso. Iimeelkeedu waa mauguste3@bostonpublicschools.org nambarka telefoonkeeduna waa 617-635-9063.
Si aad wax badan uga ogaato barnaamijka UPK ee Boston, fadlan booqo bogga Boston Public Schools Department of Early Childhood.
Hadda, waxaa jira 6 dugsiyada Commonwealth Charter oo baxsha boosaska K1 ee ardayda 4-sano jirada ah. Kuwani waa dugsiyada dawladeed oo lacag la'aan ah, oo aan ka tirsanayn Dugsiyada Dadweynaha Boston ee degmada.
Ku biirida dugsiyada Commonwealth Charter waxaa lagu go'aanshaa bakhtiyaa nasiib.
Si aad u codsato Bakhtiyaa Nasiibka dugsi Charter ah, qoysasku waa inay buuxiyaan Codsiga oonleenka ah ee Bakhtiyaa-nasiibka Dugsiyada Dadwaynaha Charter ka ah ugu dambayn Sabtida, Febraayo 29, 2020.
Inta badan dugsiyada charter-ku waxay wataan bakhtiyaa-nasiibyadooda oo waxay dhajiyaan natiijooyinka Jimcaha, Maarso. 6, 2020. (Fadlan fiiri Jadwalkeena Kal-tirsiga Diiwaangelinta Dugsiga ee taariikhaha bakhtiyaa-nasiibka dugsiga gaarka ah.)
Dugsiyada Gaarka loo Leeyahay ee Diinta
Waxaa jira ugu yaraan 18 dugsiyada diineed oo gaar loo leeyahay oo bixiya kuraasta 4-sano-jirada; dugsiyada badan oo Katoolik ah waxay leeyihiin kuraasta caruurta 3-sano-jirada ah iyo kuwa ka yar.
Sidoo kale loo yaqaan dugsiyada diinta, Boston waxay leedahay dugsiyo diimeedyo gaar loo leeyahay, oo ay ku jiraan tiro badan oo dugsiyada Katooliga ah. In kasta oo dugsiyada diimeed ee gaarka loo leeyahay ay yihiin kuwo lacag lagu dhigto, qaar badan oo ka mid ah dugsiyadaan waxay bixiyaan kaalmo lacageed iyo/ama deeqo waxbarasho oo la siiyo ardayda. Qaar ka mid ah dugsiyada katooliga ah waa bilaash ama waxay bixiyaan kaabid lacageed, oo lagu salaynaayo dakhliga qoyska.
Si aad uga qorto ugana diiwaan geliso cunugaaga 4-sano jirka ah mid kamid ah dugsiyadaan, fadlan la xariir dugsiyada gaarka ah si toos ah. Waxaad adeegsan kartaa aaladeena School Finder si aad u hesho xogta lagala xariiraayo.